Maitiro Ekubatanidza Yako Yemukati Zvekuita & Yemagariro Media Campaigns Martech Zone
China, Kurume 28, 2013 Muvhuro, June 10, 2013 Jayson DeMers
Iyo Zera reChinyorwa Chemukati
Inguva ye "zvemukati zano"Uye" zvemukati zvekushambadzira. " Kwese kwaunotendeuka, kazhinji uye kazhinji, ndicho chinhu chauchanzwa. Muzvokwadi, zvemukati chave chiri chikamu chepakati chekushambadzira pamhepo kubvira mazuva ekutanga ekutsvaga enjini yekutsvaga. Nazvino Google algorithm inogadziridza, zvakadaro, senge Panda uye Penguin, yakasimba gadziriro zano yave yakatonyanya kukosha.
Zvigadzirwa zvemagetsi zviri kushanda zvishamiso kumakambani mazhinji, uye isu hatisi kungotaura nezve zvirimo mumawebhusaiti pano. Tiri kutarisa zvakagadzirwa zvakanaka, zvine hunyanzvi mumapaketi, uye zvinoreva-zvemagariro-midhiya-runako zvemukati izvo zvinoita kuti zvinhu zviitwe kune makuru mabrand uye madiki emabhizimusi zvakafanana.
Zvemukati zano zviri zvipenyu uye kurovera mawebhusaiti. Ndiko kutarisisa kwezvizhinji zveSEO blog zvinyorwa zvakare, asi vanhu vazhinji vandinoona - vanhu vanobatanidzwa mune zvemagariro midhiya - usaronge zano remukati rezvekudyidzana kwavo nzira. Kunyangwe paine chokwadi chekuti vanhu kazhinji vanoona pasocial media seyakasiyana neyeakasarudzika, zvakapakirwa zvemukati (izvo zvinobva pakutenda kwekuti pasocial media ndeye "kugovana" zvemukati zvinowanikwa kumwe kunhu), inogona kushanda zvishamiso kune chero eruzhinji midhiya nhepfenyuro / nesimba.
Zvemukati Zano reSocial Media? Uri Kuseka Here?
Kuita sarudzo yakanaka yemukati mawebhusaiti kwakaoma zvakakwana; Mushure mezvose, zvinotora zviwanikwa zvakawanda kugadzira zvemukati zvemukati weblog iri nyore. Sei chero munhu achizoda kushandisa nguva (uye pamwe mari) kuti zvemukati zviende pasocial media? Hatisi kuzongogovana zvinongedzo uye mifananidzo?
Chikamu chakakura chemushandirapamwe wako wezvemagariro chinofanirwa kuve nekugovana zvinonakidza uye zvinehunhu zvirimo, kutumira mamadhi kana maTweets anobatsira vashandisi, kuverenga vaverengi / vateveri. nyaya. Pane huwandu hwakaenzana hwehurongwa hwakabatanidzwa; uye kunze kwekungori zano, pane "zvemukati zano" kunyangwe yemagariro midhiya. Zvitatu zvinhu zvinonyanya kukosha kuti mashandiro ehukama enhau anoita sei?
Zvemagariro midhiya zvemukati hazvina kungoitirwa kuunganidza magariro yeGoogle, kunyangwe izvo zvichikosha. Izvo hazvingori chete kutyaira-kuburikidza, chero. Kunyanya pane zvese, usangoshandisa zano remukati kungova ne "inoshanda" yemagariro enhau peji.
Zvemagariro venhau vanofanirwa kutyaira kubatanidzwa. Izvi zvinowedzera kuziva chiziviso, mukurumbira, uye kuvimba. Zvese izvi, hazvishamise, zvinoenderana nesocial media yako zano.
Ndeapi Akanaka Zvemukati Zano reSocial Media?
Tsanangudzo yezvakanaka inogona kusiyana zvakanyanya. Kunyangwe zviri nyore kutaura kuti zvinoenderana niche / musika iwe urimo wosiya zvakadaro, pane mamwe mazano ekutanga asi akakosha anoshanda kune mazhinji masocial media mazano:
Nyora uye ubudise zvirimo zvinoenderana ne "IZVOZVI": Vanhu kazhinji vanounganidza boka rezvinongedzo uye vanovaronga kuburikidza nevezvenhau manejimendi manejimendi manejimendi sengeHootsuite kana Buffer. Kunyangwe izvi zvakanaka, ita shuwa kuti zvemukati zvaunogovana hazvisi zvakakosha chete asi zvakare zviripo chaizvo.
Ita kuti zvive zvinonaka: Zvinofinha, imwe-mutsara mitsara ine yakapfupiswa chinongedzo haisi kuzonyatso kubata vateveri vako. Panzvimbo senge Facebook neGoogle +, wedzera mifananidzo inoenderana nezvako. Izvi zvinoita kuti vabude pachena uye vanobata kutariswa kwevanhu. Izvo zvakakosha zve Kutarisa-Kufarira-Chido shandisa kune zvaunotumira pasocial media. Uye usakanganwa zvekupedzisira: Chiito! Nguva dzose shandisa kufona-ku-chiito.
Nyora yakasarudzika, yakajeka, yakapusa, asi magineti mazita uye tsananguro. Nharaunda yega yega yemagariro ine huwandu hwakasiyana hwevanhu kana maitiro ekubatana. PaFacebook, vanhu kazhinji havabatanidze kuburikidza nemakomendi (pachinzvimbo, "fanika" ndezvekwavari kuenda, kune akawanda mapositi). PaTwitter, iko kubatanidzwa kunogona kuve kwakadzama zvishoma, kuburikidza nema retweets uye mhinduro. Ndakaona nharaunda yeGoogle + ichiwedzera kubatikana kupfuura kumwe kunhu. Asi zvinoenderana nemabatiro aunoita zvaunotumira pane imwe neimwe yenzira dzemagariro.
Nzwisisa kuti vezvenhau havasi vekutumira zvinongedzo chete: Haisi Digg, mushure mezvose. Iwe haupo kuti utumire zvinongedzo uye enda mberi. Iyo inoshanda yevezvenhau kuedza kuri nezve kugadzira kubatanidzwa. Kana iwe uchigona kubatanidza vashandisi vako - tora kuti vagovane, vataurezve, vapindure, vataure kana vatange hurukuro iyo inopinda muchinhu chehutachiona - iwe unogona kuti ako enhau midhiya ekuedza abhadhara.
Zvemagariro Midhiya Ndiko Kuwedzeredzwa Kwako / Bhizinesi Rako / Yako Webhusaiti
Zvemagariro midhiya haisi - uye haigone - kuve yakasarudzika chinomira kunze kwebhizinesi rako / webhusaiti. Kana iwe uri kuvaka webhusaiti, uye kuyedza kuigadzirisira iyo traffic uye shanduko, iwe unofanirwa kuve neshuwa kuti yako yemagariro midhiya yekuedza haisi kuenda pasi mukudonha.
Na "social media kuedza," ini handisi kungotaura nezve kugadzira inoshamwaridzika nhoroondo yehukama ine yakawanda vateveri, vateveri, uye inoenderana inofarira. Zvandiri kutaura chaizvo ndezvekuti:
yakavimbika tinya-kuburikidza mitengo
shanduko kubva kunharaunda dzevanhu
kuverenga uye traffic
mikana yepamusoro yezvikamu, retweets, uye yakakwira hutachiona chinhu
Makuru makuru ari kuburitsa midhiya enhau ine putika ROI. Zvemukati mekutengesa zviri kukurumidza kuve iro rinotevera danho rekushambadzira risingazivikanwe - uye fungidzira chii? It is kushanda. Uye kumashure kwese kune yakasimba gadziriso yemukati yakanyatsogadzirirwa masocial media chiteshi.
Enda pane iyo bandwagon nekukurumidza sezvaungagone nekuti ichokwadi kuti ichave yakaoma (muchokwadi, yatovepo) yekumisikidza izwi rako mukati meruzha rwese.
Tags: Content Marketingzvemukati zanoSearch Engine Optimizationseoevanhu vezvenhauSocial Media Marketing
TweetSeeker: Tsvaga Yako Inotevera Tevedzera